Niorina tamin'ny 2008, We Huachuang dia Mpanamboatra matihanina izay mifantoka amin'ny famolavolana, fikarohana ary fampandrosoana, fanamboarana sy fivarotana USB-C HUB ihany. Hatramin'ny andro voalohany nanorenana, nataontsika loha laharana ny kalitao sy ny fiarovana. As ISO 9001-Orinasa orinasa 2000certificated, ny vokatra azontsika dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena maro toy ny CE, FCC, ROHs,REHETRA sy CCC. Inona koa, mitandrina tsara ny fanavaozana hatranyny entana rehetra izay noforonina sy namboarina avy aminay, ny ankamaroany dia patanty any Sina, ny sasany amin'izy ireo dia mahazo patanty any Eropa ary Etazonia koa.
Noho ny fahaizan'ny fampandrosoana, fahaiza-manao famokarana ampy ary ny politika momba ny kalitao hentitra, dia nahazo laza eran'izao tontolo izao ny vokatrao noho ny famolavolana tena tsara sy ny fanatanterahana tsara. Ampiasaina ireo firenena faritany d toy ny Etazonia, Failandy, UAE, Canada, Singapore, Holandy, Alemana, HK, UK, France, ary Espaina. Manome vokatra OEM sy ODM ho an'ireo atrikasa malaza eran-tany sy any ivelany izahay, toy ny HP, Vivanco, Kobian, Promote, Vertex, Macher, Strax, ary Gerth Gmbh.
Ny zavatra rehetra dia natao ho an'ny tenantsika, mpihaza any Chine ny ankamaroan'izy ireo, ny sasany amin'izy ireo dia mahazo patanty any Eropa sy Etazonia.
Ny entana rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny CE / FCC / ROHS / REACH, ny ankamaroan'izy ireo dia nahazo izany fanamarinana izany.
3. Fiasa mahafinaritra
(mitovy amin'ny akorandriaka Apple, ny ankamaroan'ny mpamatsy dia miaraka amina pirinty 120 'fa ny misy azy an-tsoratry ny 180') ary koa ny bitika kely vitsivitsy (ohatra: ny seranan-tsambo rehetra dia miaraka amina malefaka).
4. Kalitao matevina
ny volavolan-drafitra tena tsara izay mampiorina tsara ny kalitao (ny ankamaroan'ny HUB eto an-tsena dia mbola manana olana mafana, tsy mifanaraka amin'ny olana, ary olana momba ny fitsabahan'ny WiFi saingy ny vokarintsika dia mbola voavaha io olana io.